Olga Romay Pereira. Kubvunzana nemunyori wePataive Tiri Vamwari | Zvazvino Zvinyorwa
Mifananidzo. Kutendeseka kwaOlga Romay.
Olga Romay Pereira, akaberekerwa muLugo, munyori we nhoroondo yenhau uye yakaburitsa mazita akadai se Vana senator, Pericles mugari wekutanga y Mutambi wechess. Nhoroondo yake yazvino ndeye Pataive tiri vamwari. Ndipe izvi indavhiyu Ndinokutendai zvikuru nenguva yenyu uye mutsa.
Kubvunzana naOlga Romay Pereira
OLGA ROMAY PEREIRA: Pasi rose mumazuva makumi maserenaJules Verne. Yaive chikamu cheunganidzwa weiyo yakaratidzwa Bruguera. Mavara akavezwa murwiyo uye iwo mapeji aive nemavara kuruboshwe uye komiki kurudyi.
Nyaya yekutanga yandakanyora yaive pfupi nyaya, yakadaidzwa Gumi muzana uye zvaive zvemurume akatengesa mweya wake kuna dhiabhori, uyo akamutorera zvese zvaaida asi achigara achitora chikamu chemhindu. Ini ndinofunga ndarasikirwa nayo, yanga isingakoshe.
ORP: Mbada yaLampusa. Kwakave kwekutanga kwangu kusangana nemabhuku epamusoro. Kunyangwe ndakaiverenga pandaive nemakore gumi nemashanu, ndichiri kurangarira zano, mimwe mitsara yekufananidzira uye mavara. Handina kuda kuriverenga zvakare, kunyangwe pandakaenda kuSicily. Zvirinani nenzira iyi, haufanire kutyora mashiripiti.
ORP: Hispanics yaizofara kuverenga zvakare Vargas Llosa, Unamuno, Michael Delibes naJuan Marse. MaAmerican ku Scott fitzgerald, Pauro oyster uye Jack London. MaGerman kuenda kuna Tomas murume naHerman Hesse. Italians ku Ítalo Calvin uye French ku Kuzvikudza, Flaubert kare amélie Nothomb, kunyangwe ndichifunga kuti anoverenga seBelgian asi anonyora muchiFrench.
Munhoroondo: Leon Arsenal, Luis Villalon y Emilio lara.
Kunyangwe dai ndaifanira kutora bhuku kuenda kuchitsuwa chegwenga, rakanakisa rinogara riri iro Historia de Herodotus.
Verenga Belisarius kubva kuna Robert Makororo.
Hapana, ini ndinonyora en cualquier lugar kwandinogona kuisa laptop yangu.
Mukati Me hofisi mushure mekurara.
AL: Chii chatinowana munoverengeka yako Pataive tiri vamwari?
ORP: Iyo novel inotanga ne kufa kwe Alexander Mukuru muBhabhironi, mukuru wemauto Ptolemy anoba chitunha ndokuenda nacho kunoviga kuEjipitori. Iko kune nyika inopenya yakamirira iwe, kupesana kwetsika pakati penyika yechiHellen uye yekare tsika yenyika yeNairi iyo yakaramba isina kuchinja kwezviuru zvemakore.
Iyo novel iri set munyika mbiri dzakafanana: Bhabhironi neIjipita. MuBhabhironi Humambo hwaAlexander hwakaputswa uye muEjipitori gavhuna mutsva Ptolemy anotarisirwa.
En Babilonia mavara anogara mumuzinda we Nebhukadhinezari kana mune izvo zva Dhariusi, pakati pevakuru vakuru, vakadzi, vatenwa, uye unyengeri hwechirikadzi dzaAlexander. Vhura Ijipiti muverengi achaongorora Tebas mutemberi yeKarnak, guta re Memphis uye ichabatsira mukuvakwa kwe Alexandria.
Munyika yeNire, ivo protagonists vari vapristi vanogara muKarnak uye vane halo yemweya inoshayikwa nevaMacedonia. Nyika ChiMacedonian Iye murwi, anoda chinzvimbo uye anotongwa na vaimbova vakuru vaAlexander.
Uye kupindirana muchirevo kunoratidzika kune fan inonakidza ye vakadzi: Thais, hetaira yaPtolemy, Artama, mukadzi wake wePezhiya, Roxana, Chirikadzi yaAlexander, Eurydice, mudzimai wezvematongerwo enyika waPtolemy uye Myrtle, mambokadzi weMasedhonia.
Mapuranga ese ari mavirimuBhabhironi nemuIjipita, zvinosangana apo General Ptolemy anosvika munyika yeNire. Ndipo panguva iyo yekuMasedhonia inofanirwa kudzidza kutonga uye kuenderana netsika nemagariro eEjipitori.
ORP: Ndini arctic kwazvo, Ndiri wemakirabhu maviri ekuverenga uye imwe yehunyanzvi, ndinozvibvumidza kuti ndipe kurairwa nezvakataurwa nevamwe vangu. Ini ndinofunga zviri nani nenzira iyi, nenzira iyi ndakaverenga mabhuku andaisazombosarudza muchitoro chemabhuku. Icho chiitiko chinonakidza, ini ndinochikurudzira kune wese munhu.
ORP: Ndiri kuverenga Mangwana rusununguko rakanyorwa naDomininique Lapierre naLarry Collins. Iye zvino ndinonyora nezvehunhu chaihwo: mwanasikana wamambo weRoma. Ini ndoda kusaratidza kuti ndiani.
Iwo musika wakazara nemvura uye nevaverengi vari kudzikira. Chinoitika chinoitika: muverengi izvozvi anoda kuve munyori, vazhinji vanotenda kuti vanogona kusimudzira kana, zvirinani. enzanisa vako vanyori vaunofarira. Kuonekwa kwevanyori kunounza mhedzisiro yekuti iyo zvinyorwa vanotarisa akazara nezvinyorwa. Uye, kune rimwe divi, iyo Internet izere nevanyori vanowana iyo desktop kutsikisa.
Vaparidzi vakapinda nenzira inokanganisa: mwedzi wega wega vanoburitsa nhau, kuwandisa zvitoro zvemabhuku nezviuru zvemabhuku izvo vamwe vasingawane zvinopfuura mwedzi pamashefu. Iyo booksellers ivo havachagone kukurudzira mabhuku nekuti ivo isingakwanise kuverenga nekumhanya kwakadai. Ivo vanofanirwa kuvimba kuongororwa, mablog, vatsoropodzi uye nehunhu hwavo.
Kurwira kutora nzvimbo mumutsara wekutanga hakuna kuenzana, vaparidzi vadiki havagone kuwana dzakawanda nyaya uye vanoiswa mumutsara wechipiri. Mabhuku anotenderera mumahwindo ezvitoro ezvitoro zvemabhuku kunge zvipfeko zviri muhwindo rechitoro chemafashoni, kana munhu akadzokera kumwedzi miviri kunotsvaga iro bhuku raakatarisa, zvinowanzoitika kuti harimo.
Ne panorama yakadaro, vanyori isu takapihwa mhosva yekuve ivo matoyi akatsemuka yeiyi indasitiri, chikamu chisina kusimba: unofanirwa kunyora nekunyora nekunyora, gara uri pamutsara wenhau, uyezve unofanirwa kunge uri pane network. Hapasisina izwi remuromo, chete masocial network. Akapenga. Iva nekuonekwa kana kufa.
ORP: Ini Ndakagara ndichigara mumatambudziko. Ini ndakabatana nenyika yekutsikisa kana kutengesa kwadzikira, zvese zvakaverengerwa pamadhijeti zvakabiwa uye vaverengi vakaenda kunoona akateedzana papuratifomu. Ini handina kumborarama zororo remakumi mapfumbamwe, kana iwo makuru edhisheni, kana ini handina kuona akasiyana-siyana evaparidzi kwavanopa zvinyorwa zvangu.
Senguva dzose Ndakashambira pakati pesharkIni handisi nostalgic uye zvidiki budiriro kukunda kwandiri. Sezvavanotaura munhabvu: mutambo nemutambo. Ini ndinofungidzira kuti ini ndichiri muchikamu chekudzidza, ini handipererwe nemazano uye zvinondinakidza kunyora.
Takaita chakashata kuti vaverengi vatize. Iwe haugone kunyora senge makore makumi mashanu apfuura, kana kunyangwe makore gumi apfuura. Muverengi kana akasvotwa haapfuuri peji regumi enganonyorwa dzinofanirwa kutanga uye kurwisa nharembozha, TV uye komputa, vaverengi vanotsauswa nechinhu chero chipi zvacho, isu takapararira. Ini zvakare ndinofunga vaparidzi vanofanirwa kutora imwe yemhosva. Pamwe muverengi achiripo, asi haapihwe zvaari kuda.
Tsika nemagariro idziva riri kudzikira rizere nemachira, vanopedzisira vodyana, hapachina nzvimbo. Mukupedzisira izvo zvisingadzivisike zvichaitika: iyo Kuverenga Zvichava a nhare yevashoma, enyambo achatora kukosha kwakanyanya uye kwakanyanya, mabhuku anozoonda, vanyori vawedzere kupindirana uye zvinyorwa zvidiki.
Izvo zvakanaka: kuchine mabhuku ezvese zvido, vatsoropodzi vakatendeseka, uye vaparidzi vakashinga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Olga Romay Pereira. Kubvunzana nemunyori weTaive Tiri Vamwari